12Apartment TimetoSmile Ploscha Rynok - I-Airbnb
L'viv, L'vivs'ka oblast, i-Ukraine
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Marina
Amafulethi asendaweni yabahamba ngezinyawo, indawo engokomlando, azungeze kukhona amathilomu amaningi, izitolo, izikhumbuzo zokwakha, imnyuziyamu. Ukubukeka okuhle kusuka emafasiteleni kuya ezikhumbuzweni. Ifulethi linakho konke okudingayo ukuze uhlale ngokunethezeka.
-mini-fridge, -dryer, ilondolo
Ama-towels,izinto zombhede .
Ifulethi lisesitezi sesine sesakhiwo esingokomlando (alikho ikheshi). Isitoreji semithwalo esiseduze sitholakala ku-21 Halytska St. (200 m ukusuka efulethini) Ukungena masinyane nokuphuma sekwephuzile kukhokhwa ngokwengeziwe (kuncike ekutholakaleni)
Amafulethi atholakala endaweni engokomlando yokuhamba, ezungeze amathilomu amaningi, izitolo, izikhumbuzo, amamnyuziyamu. I-sill yefasitela ethambile enombono omangalisayo wesikhumbuzo sobungcweti bokwakha. Ifulethi linakho konke okudingayo ukuze uhlale ngokunethezeka (iketela, ifriji elincane, izitsha). Amafulethi atholakala esitezi sesine sendlu engokomlando (alikho ikheshi). Ikamelo lesitoreji litholakala ku-21 Atlantska St. (20 m. Kusuka emafulethini). Isitolo esikhulu samahora angu-24 emgwaqweni wase-Serbia 13 (20m ukusuka emafulethini). Ukungena ngaphambi kwesikhathi nokuphuma emva kwesikhathi kukhokhelwe (kuncike ekutholakaleni)
4.68 · 111 okushiwo abanye
Isonto lase-Latin lingamamitha angu-200 ukusuka emafulethini "Ku-Rynok Square", i-Market Square nayo ikude ngamamitha angu-200, i-Opera House ingamamitha angu-800
Izindawo zokubuka indawo
eziseduze i-Gerdan 0.1 km
Imnyuziyamu Yemibono 0.1 km
ISonto ne-Monastery Bernardine 0.1 km
Isigodlo sase-Lubomirski 0.1 km
Imnyuziyamu Yomlando yase-Lviv km
I-Market Square ingamakhilomitha angu-
sase-Kornyakta singamakhilomitha angu- I-Latin Cathedral Cathedral km
Izindawo Ezithandwa Kakhulu
Isigodlo sase-Bandinelli esingu- km
Isonto le-Saint Eucharist 0.3 km
Isikhumbuzo se-Volodymyr Ivasyuk 0.3 km
Isonto lase-Guangzhou liyi-0.3 km
sase-Armenian Atlanbishops singamakhilomitha angu- I-Armenian Cathedral
ingamakhilomitha angu- Shevchenko Prospektwagen km
I-Potocki Palace 0.5 km
Indawo yemidlalo yaseshashalazini ebizwa ngo-Maria Zankovetskwagen km
I-Lviv National Academy Opera ne-Ballet Theater ingamakhilomitha angu-
Izindawo zokudlela nezimakethe
I-Plunger, isinkwa newayini Indawo yokudlela
engu-50M Indlu yamaqhawe Indawo Yokudlela 50m
200m Town Hall 200m
Заселення Ч висилення самостйно
Zingenele futhi uphume
Hlola ezinye izinketho ezise- L'viv namaphethelo